Fomba fampiasana ny borosy Rotoscoping ao amin'ny Adobe After effects CC | Famoronana an-tserasera
Fomba fampiasana ny borosy Rotoscope amin'ny Adobe After Effects CC
Mercedes Big Real | | Tutorials
Miaraka amin'ny fitaovana Rotoscope Brush ao amin'ny After Effects CC, ankoatra ny fahazoana vokatra voajanahary amin'ny hetsika, dia afaka mamorona sary mihetsika amin'ny fomba tsotra isika. Amin'izao fotoana izao, Rotoscopy dia teknika efa be mpampiasa satria ny vokany dia tena tany am-boalohany satria ahitana ny sary ny sarimiaina iray amin'ny sarimihetsika tany am-boalohany, amin'izany fomba izany dia afaka mahatratra fomba iray tsy manam-paharoa ho an'ny sarimiaina isika.
Miaraka amin'ity fitaovana ity, afaka manatanteraka ny Rotoscopy antsika ho azy na amin'ny tanana isika. Ao amin'ity lesona ity hataontsika mandeha ho azy izany.
1 Nanomboka izahay
2 Rehefa voaomana sy vonona hiasa ny zava-drehetra
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny firaketana horonantsary amin'ny fakantsarintsika, hahazoana antoka fa manana famirapiratana tsara ity video ity ary manalavitra ny aloka. Ireo zavatra na olona noraketinay dia tsy maintsy miavaka tsara. Ny aloka vitsy kokoa ananantsika ary ny mampiavaka ny endriny no mahamora kokoa ny tetik'asa.
Hanombohana, manokatra ny rakitra izahay amin'ny Adobe After Effects CC. Zava-dehibe ny fanatanterahana ny dingana iray manontolo ao amin'ny Rindrambaiko sosona ary miaraka a vahaolana feno. Mba hanokafana ity varavarankely ity dia tsindrio indroa fotsiny ny horonan-tsarimihetsika ao amin'ny fikandrana fitambarana.
Misafidy ny ampahany amin'ny horonan-tsary tianay hatao ny Rotoscopy, raha ampahany fotsiny no tadiavintsika na raha te hanao ilay horonan-tsary iray manontolo izahay.
Rehefa voaomana sy vonona hiasa ny zava-drehetra
Afaka manomboka izao isika, hampiasa ilay fitaovana Borosy fanaovana sary na borosy rotary. Ity borosy ity dia hanamora ny asan'ny ankamaroantsika. Misafidy eo ambonin'ilay sary ny sary tianay hamboarina. Raha miavaka tsara ny tarehimarika dia hanampy anao haka ilay sary miaraka amin'ny borosy ny programa.
Raha sendra diso tafahoatra ianao azonao atao ny manindry bokotra Alt + havian'ny totozy ary hisintona hamafana, toy izao mandra-pilazanao ny drafitr'ilay sary.
Vantany vao vita, ny programa dia hanao sary ny tarehimarika isaky ny frame, amin'ny fanomezana fotsiny ny milalao.
Mba hanatsarana ny sary mandeha ho azy ataon'ny programa ho antsika dia tsy maintsy ampiasaintsika ny fanaraha-maso ny vokatry ny Rotoscopy Brush. Raha te hahita ireo fanovana ireo ianao dia mila misafidy ilay Fantsona Alpha.
ny Fanaraha-maso ny vokatry ny borosy Rotoscope, dia ny milaza amin'ny programa ny kajikajy izay tokony hanatanterahany azy ho tonga lafatra ny sary.
Ity rafitra mandeha ho azy ity dia tena ilaina ary koa mampahazo aina, ho fanampin'izany dia azonao atao ny mamoaka ny eritreritrao ary manaova fomba isan-karazany, na amin'ny zavatra tena izy na olona, ​​na dia sary mihetsika misy loko fisaka na silhouette aza dia azonao atao amin'ny fomba hafa.
Raha te hanadihady bebe kokoa momba ny After Effects ianao dia afaka mahita fampahalalana bebe kokoa eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Fomba fampiasana ny borosy Rotoscope amin'ny Adobe After Effects CC
hPerez dia hoy izy:
Efa vonona daholo ny zava-drehetra, nandany fotoana kely aho fa tsy misy zavatra tsy normal xD
Rehefa hitako ny horonantsariko efa vita amin'ny .MP4 dia tsapako fa maharikoriko IZANY !!
Misy lesoka tsy hita tamin'ny fanontana: ny sosona rotoscopy dia tsy nifanaraka amin'ny horonantsary intsony, efa nanao clone an'ilay sosona aho ary nesoriko ny vokany ary mijanona ho SAMY ihany.
Misy torohevitra ve ??
Te hitomany aho: ´c
Valiny amin'i HPerez
Io no sary famantarana vaovao an'ny Taco Bell
Font maimaim-poana ho an'ny Mpamorona